Gabagabada shir weynaha xisbiga S - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Stefan Löfven, hoggaamiyaha xisbiga Socialdemokraterna. sawir: BjÃ¶rn Larsson Rosvall/TT
Gabagabada shir weynaha xisbiga S
La cusbooneeyay onsdag 12 april 2017 kl 17.58
La daabacay onsdag 12 april 2017 kl 14.23
Shir-wenihii xisbiga Socialdemokraterna oo maanta ugu soo gabagaboobaya magaalada Göteborg ayuu hoggaanka xisbigu inta badan ku guuleeystay in fikirradii uu watay lagu raaco.
Halka ey xubnaha wakiilladu ku guuleeysteen sidii ey wax uga bedeli lahaayeen waxyaabo ey ka mid yihiin macaasha adeegyada hab-nolol wanaagga iyo siyaasadda looga hor-tegi karo tuugsiga.
Dhanka kale falkii argagixisada ee jimcadii ina dhaaftay magaalada Stockholm asiibtay ayaa hareeyay shir-weynihii xisbiga Socialdemokraterna uga furmay magaalada Göteborg sabtidii ina dhaaftay. Middaasina oo ay caddeeyn u ahayd dib u dhicii ku yimid khudbaddii uu shir-weynaha ku furi lahaa madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven.
– Waxaa jiray dadyoow qaraabadood ka baadi-goobey cusbitaallada. Waxaa jira qaar aan dib dambe u maqli doonin codadkooda cid ay jeclaayeen oo qiime ugu fadhiyay. Waxaan u geli doonnaa ugaarsi ballaaran dileyaashaa annaga oo la kaashaneeyna xooggayaga dimoqoraadiga. Ma jiraan wax aannu ka wada xaajoon karno, sida uu qudbaddiisa ku sheegay.
Dhacdadii ugu waynayd ee shir-weynaha ayaa ahayd ereyadii wasiirka arrimmaha gudaha Sweden Anders Ygeman ee uu shalay subax-nimadii shir-weynaha ka jeediyay. Waxaa la go’aansaday 10 kun oo ciidan ammaan oo hor leh illaa iyo sannadka 2024.
Sidoo kale waxaa jirey su’aallo kale oo dhaliyey doodo ballaaran. Hoggaanka xisbiga ayaa xoogga saaray siyaasadda iskuulka kolkii uu ka hadlayay xadeeynta macaashka adeegga ee nidaamka hab-nolol wanaagga, hase yeeshee ey wakiilladu ku biiriyeen sidoo kale saqafka macaashka xannaanada waayeelka iyo dar-yeelka caafimaadka.
Mooshinno badan oo shir-weynaha lagu soo ban-dhigey ayaa sidoo kale lagu soo qaaday sidii dib loogu noqon lahaa siyaasaddii deeq-si-nimada ee soo galootiga. Iyadoona dhexda la isugu yimid aakhirkii in xisbiga S uu jecel yahay joogteeynta sharciga deggenaansho iyo suurtagalka mideeynta qaraabada kala maqan inuu dan u yahay la qabsiga bulshada, hase yeeshee uu xisbigu middaa uga howl-galo ururka midowga Yurub EU sidii uu waddammada EU uga dhaadhicin lahaa.
Shir-weynaha ayaa sidoo kale u codeeyay inuu dalka Sweden kor u qaado tirada qaxootiga ee saamiga uu dalkani uga soo qaato xeryaha qaxootiga caalamka (kvotflyktingar) iyo sidoo kale in la helo dhabbooyin sharciyeey-san ee Yurub lagu soo geli karo si magan-gelyo looga dalbado.
Dood dhalisay dareen aad u ballaaran ayaa la xiriirtay falalka tuugsiga. Halkaasina oo uu qoraalkii hoggaanka xisbigu loogu soo jeediyay dhaliillooyin aad u ballaaran. Ugu dambeeyntiina lagu guuleeystay in qeybo laga bedelo.
Nidaamka in la ilaaliyo sidoo kale in dib u eegis lagu sameeyo ka raridda goobaha aan sida sharciga ah lagu dagganeyn hagaajintooda, hase yeeshee howshaa loo galo si hab-sami oo shakhsiga lagu xushmadeeynayo. Qoraal ku daristan ayay soo dhoweeysay Lena Micko, kana tir-san xubnaha hoggaanka sare ee xisbiga VU.
– Waa mid iska cad in la qadariyo shakhsiga, dhallaanka iyo wixii la mid ah, waxaa laga yaabaa inay ahayd wax loo qaatay inay iska jiri doonto. Waxaase loo baahaday in si cad qoraalka loogu xaqiijiyo, sida ay sheegtay Lena Micko.
Go’aammada kale ee muhuummada ku fadhiya ee la isku fwaafaqay shir-weynihii 39-aad ee xisbiga ayey ka mid ahaayeen in iskuullada laga mamnuuco qaybo diini ah, in dhammaan laga hor-tago caqabadda uu raggu u geeysto haweenka, in lagu tallaabsado dhabbada sidii lagu shakhsiyaydeeyn lahaa ceymiska waalidiinta inta aan la gaarin doorashada xigta 2018 iyo in la baabi’iyo xeerka ogolaanaya in soo-galootigu xor u yahay inuu dego goobta uu doono, waxa lagu magacaabo ebo-lagen.